Howlgalkii Pizza House oo lasoo afjaray, iyo Faahfaahin Khasaaraha weerarka | Jubbaland Media Online
Howlgalkii Pizza House oo lasoo afjaray, iyo Faahfaahin Khasaaraha weerarka
Posted on June 15, 2017 in Feat, Wararka // 0 Comments
Ciidamada sida gaarka ah u tababar ee Gaashaan ayaa soo afjaray weerar ay kooxo hubeeysan xalay ku qaadeen Pizza House oo ah dhisme ay dhalintu aad u tagaan islamarkaana lagu iibiyo cuntooyin fudud.
Kooxo hubeeysan ayaa xalay gudaha u galay, ayagoo jiiray ilaaladii dhismaha, waxaana ay halkaasi ku sugnaayeen ilaa saaka aroortii.
Ciidamada Gaashaan ayaa howlgallo saacado badan qaatay kadib ku guuleystay in ay soo afjaraan howlgalka, waxaana dhismaha la weeraray laga soo saaray dhaawcyada iyo meydadka dadkii ay kooxda weerarka geysatay waxyeelada u geysteen.
Ilaa hadda ina la xaqiijiyay ilaa 18 qof ayay kooxdaasi ku dileen gudaha dhismaha, ayadoo lagu soo waramayo in 18-ka qof ay ku jiraan 6 gabdhoo oo laba kamid ah ay ahaayeen walaalo, waxaa sidoo kale la sheegay in dhaawacyadu kor u dhaafayaan 19 qof.
Saraakiishii hogaamineeysay howlgalka lagu soo afjaray kooxda weerartay Hotelka ayaa sheegtay in ay toogteen kooxihii qabsaday Hotelka, ayna haatan dhismaha si buuxda gacanta ugu hayaan ciiidamada dowladda.
Dhismahan la weeraray ayaa aalaaba waxaa isugu taga dhalinta, waa goob aad loo qurxiyay islamarkaana laga helo cuntooyin macaan.